I-Blue View Too cottage-Izinyathelo ukusuka ogwini/ekushoneni kwelanga - I-Airbnb
I-Blue View Too cottage-Izinyathelo ukusuka ogwini/ekushoneni kwelanga
South Haven, Michigan, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Mike
HLALA EMPHEKWENI/IYA OGWENI/UKUBONWA OKUHLE/IZINKONZO/I-AC Ebandayo! Indlwana yokulala engu-2 ekhangayo (500 Sq. Ft.) eseduze nePackard Park enolwandle lwayo olunesihlabathi. Letha ama-flipflops akho bese uqonda emanzini!
Indawo yokuhlala, imibhede emi-3/igumbi lokugeza eli-1 eligcwele/ikhishi elihle eline-w/ Washer/Dryer. Indawo enkulu yokuhlala futhi uphumule futhi ubukele ukushona kwelanga.
I-Wifi, i-TV, izihlalo zasebhishi, izambulela, amathoyizi, amathawula, AMABHAYIBHELI afakiwe
Woza ube nathi ekhaya!
Hhayi nje ukuqasha, leli yikhaya!
**IZINDLU EDUZE NEMIBHEDE E-4 NAYO IYATHOLAKALA**
Leli kotishi elihle litholakala ngaphesheya kwePackard Park. I-Packard Park inolwandle lwayo olunesihlabathi. Ungaphuma ngomnyango wangaphambili futhi uwele umgwaqo futhi ngomzuzu ongu-1 ube sebhishi. Indawo yokubuka olwandle ukuze ujabulele ukushona kwelanga okuhle kakhulu owake wakubona....Noma vele uhlale emphemeni wakho ekotishi bese ubuka nje imibala emihle yokushona kwelanga igcwalisa isibhakabhaka phezu kwamanzi.
***Uma udinga indawo eyengeziwe kukhona nendlu ongahlala kuyo. Ingatholakala ku-Airbnb njengeBlue View
Ikotishi livuselelwe ngokuphelele ukuze lihlangabezane nezidingo zakho nezifiso zakho ngenkathi ujabulela isikhathi sakho eSouth Haven. Imibhede ethokomele enamalineni amahle...hhayi obungakulindela lapho uqashwa. Indlu yokugezela iyisiqephu esigcwele esingu-3 esiqedwe kahle futhi sihlotshiswe. Izilwane ezifuywayo azivunyelwe.
Ikhishi liyindawo nonke eningazipholela ngayo... enetafula lokudlela nendawo eyanele yokulungiselela ukudla. Isitofu, isiqandisi esigcwele, iMicrowave...futhi yebo kukhona umshini wokuwasha izitsha! Kukhona nendawo yokuwasha/yokomisa ngalezo zikhathi ongase uyidinge.
Ezinye izinsiza i-Wifi, i-TV...ukuze ukwazi ukusakaza izinhlelo zakho ozithandayo. Imidlalo, izindida, amabhayisikili, izihlalo zasebhishi, namathoyizi esihlabathi kuzokuvumela isikhathi esigcwele esijabulisayo phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho.
Inethezekile futhi Kakhulu, ihlanzeke kakhulu. Siyakwethembisa ukuthi uzolithanda leli kotishi, futhi umphakathi waseSouth Haven muhle impela!
Udinga indawo eyengeziwe?....Indlu engamamitha-skwele angu-2000 esanda kubuyekezwa iyatholakala. Lesi sakhiwo singatholakala ngaphansi kweBlue View. Eduze nekotishi, lo mbhede ongu-4, indlu yokugezela eyi-2.5 ene-AC ephakathi izokuvumela ukuthi ujabulele wonke umndeni wakho ndawonye. Zombili lezi zakhiwo zizolala abantu abangafika kwabayi-18, izindawo zokugeza ezingu-3.5 nendawo enkulu eluhlaza (igceke elibiyelwe) nokuhlala ngaphandle. Woza uzojabulela isihlabathi, amanzi nokushona kwelanga. Uma usufikile, siyazi ukuthi uzofuna ukulenza isiko laminyaka yonke!
Le hood engumakhelwane esezingeni eliphezulu ihlanzekile, inakekelwe kahle futhi iphezu noma ngaphesheya komgwaqo ukusuka emanzini. Kukhona i-French Cafe encane enhle emgwaqeni, kanye nesitolo esincane esiseduze nje.
Sisalelwe yihora futhi sizotholakala uma kunesimo esiphuthumayo.
Sithanda ukuba khona ukuze sikuhlangabeze uma sikwazi...ngezinye izikhathi kuzoba lapho uhamba noma ungena. Cishe kuzoba phakathi nesonto lapho ngiza ukuzogunda.
Hlola ezinye izinketho ezise- South Haven namaphethelo